I-Casio SGW600H-1B Wrist Watch - iTrivoshop ku- $ 64.95
Ikhaya I-icon phansi icon Jewelry I-icon phansi icon Iwashi le-Casio SGW600H-1B Lasesihlakaleni - iTrivoshop
Ukutholakala: ukuhumusha akukho: en.general.icons.icon_check_circle icon I-3 kuphela eshiyiwe!
Uma uphila impilo esebenzayo futhi udinga isiqeshana sesikhathi esingagcina i-SGW600H inikeza izici ezibalulekile. Ngekhampasi ne-thermometer eyakhelwe ngaphakathi, isibonisi semephu yesikhathi somhlaba kanye nokumelana kwamanzi ngamamitha ayi-100, noma yikuphi lapho uya khona le modeli izokugcina usendleleni nangesikhathi.
I-Twin sensor -Ikhampasi yeDigital ne-Thermometer
Isikhathi somhlaba nesibonisi semephu yomhlaba
Ukumelana kwamanzi ngamamitha ayi-100
UJan 29, 2020
Ngeneliseke ngempela ngalo mkhiqizo wami. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Umsebenzi omuhle, nakanjani ngizo-oda futhi! Lokhu kunemikhiqizo esize kakhulu ibhizinisi lethu.